“Like Ants Fighting Elephants”: Student Activists in Myanmar Speak Out - New Naratif
Author Kyaw Hsan Hlaing
Artist Thu Ra Kyaw
Despite dozens of arrests this year,asmall group of student activists are determined to raise their voices on behalf of civilians in Rakhine State who have been affected by armed conflict, and largely silenced by internet and media restrictions.
Kyaw Hsan Hlaing isaresearcher focusing on peace and conflict, rights and social justice issues in Myanmar. He is alsoaco-founder of Institute for Peace and Governance (iPG),anonprofit focusing on peacebuilding, youth leadership, peace and governance research, and humanitarian crisis management. ကျော်ဆန်းလှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပဋိပက္ခ၊ လူအခွင့်အရေး နှင့် လူမှုရေးတရားမျှတႈႈရေးတို့ကို အဓိကထား လေ့လာနေသော သုဒေသီတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အုပ်ချုပ်စံမံခြင်းအဖွဲ့ (iPG) ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
Emily Fishbein isafreelance journalist focusing on issues related to conflict and displacement, human rights, and social justice in Myanmar and Malaysia. အေမလီဖိရှ်ဘီမ်း(အ်) သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့၏ ပဋိမက္ခ၊ စစ်ဘေးရှောင်၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လူမှုရေးတရားမျှတရေးနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်နေသော အလွှတ်တမ်းသတင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Emily Fishbein adalah seorang wartawan bebas yang memfokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan konflik dan anjakan paksa, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di Myanmar dan Malaysia.
Thu Ra Kyaw isawatercolor and acrylic artist from Rakhine State, Myanmar, currently living in Yangon. See his work at thurakyaw.com. သူရကျော်သည် ရန်ကုန်တွင် နေထိုင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ watercolor နှင့် အက်ခရီလစ် ပန်းချီပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ thurakyaw.com တွင် သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။